Filomena iyo baraf ka dhacay Spain 2021: sababaha iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Spain waxaa ku dhufatay duufaan Filomena in lagu raray dabaylo qoyan oo ka imanaya koonfurta iyo inay la kulantay lakab hawo qabow oo ka soo barakicisay aagagga badda. Isku dhaca miisaanka hawada ayaa abuuray baraf taariikhi ah oo ka dhacay Jasiiradda Iberian.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax walba oo kooban oo ku saabsan saadaasha, sababaha iyo cawaaqibta duufaanka Filomena.
1 Saadaasha duufaanta Filomena
2 Baraf iyo dhaxan
3 Sababaha duufaanta Filomena
4 Isbedelka Cimilada
Saadaasha duufaanta Filomena
Dayax gacmeedyada saadaasha hawada ayaa horeyba u ogaa dhaqdhaqaaqii cufnaanta hawada ee ka timid koonfurta iyo woqooyiga. Marka tiro badan oo hawo ah oo qabow ay la kulanto hawo diiran oo qoyan, duufaan ayaa ka dhalata farqiga u dhexeeya cadaadiska. Hoos u dhaca cadaadiska wuxuu abuuray baraf aad uxun dhamaan jasiiradda oo dhan. Barafku wuxuu ku dhacay meelo aad u hooseeya oo caadi ahaan aan roobab sidan oo kale ahi ka da'in. Laga bilaabo hadda waxaa sidoo kale jira maalmo la imanaya wejiga cusub ee tiirarka leh heerkul hoose oo ka dhigaya barafka barafoobay oo soconaya maalmo.
Waxaan soo aragnay inta lagu jiro usbuuca dhammaadkiisa sida barafka oo kale oo aan horay loogu arag taariikhda Spain. Baraf la sheegay waxay u yimaadeen inay xayiraan magaalada Madrid iyo caasimadaha kale ee gobolada oo ka tagaya buste baraf ah oo daboolay ku dhowaad dhammaan dhul-badeedka. Duufaanta noocan ah waxay abuurtay xaalad deg deg ah sababtoo ah dhaqdhaqaaq la'aanta xarumaha magaalooyinka. Saadaasha Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka ayaa muujisay inay jiraan xaalado isdaba joog ah oo duufaanta Filomena u rogay duufaan kaamil ah.
Baraf iyo dhaxan
Duufaanta koonfureed waxaa lagu soo raray roob da'ayay maalmo kooban waxayna fursad u siisay xilli cirka cirka uu ka muuqdo laakiin heerkulkiisu aad u hooseeyo, ma ahan wax saameyn ku yeelanaya joogsiga hore ee roobka, halkii, waa dhacdo ka baxsan duufaanka. Xaaladan jawiga jawigu si dhammaystiran ugu xidhan yahay duufaanta Filomena si ay awood ugu yeelato inay beddesho Spain meel baraf ah in muddo ah. Waad ku mahadsan tahay xaaladahan jawiga cimilada awgood waa suurtagal in la ilaaliyo xaaladaha lagama maarmaanka ah si barafka u hanan karo maalmo.
Ka dib baraf aan caadi ahayn oo dhacay dhammaadkii hore, mowjado qabow ayaa yimid oo calaamadeeyay heerkulka ka hooseeya 10 darajo meelo badan. Qiimaha heerkulka Madrid ee -10 darajo ayaa lagu gaadhay. Qiimayaashan lama arag tan iyo 16-kii Janaayo, 1945 oo heer kulka uu gaaray -11 digrii. Qabowga daran ee habeenka iyo jawiga qabow ee maalintii ayaa doorbiday joogtaynta barafka iyo barafka barakaysan aagag badan inta lagu jiro usbuuca.
Waxaana jira wadarro arrimo ah oo ka dhigay barafka inuu sii jiro usbuuca oo dhan. Aan aragno waxa ay yihiin qodobadan:
Antyclone waxay u jiideysaa wabiyada cirifka woqooyi dhanka gacanka. Daawadan lidka ku ah 'anticyclone' ayaa mas'uul ka ah inay ka tagto cirka oo nadiif ah, dabaysha ayaa gebi ahaanba hoos u dhacday iyo jawiga maalinta qabow leh ee heer kulka ku dhow 0 darajo.
Muddo dheer oo habeennada idaacadda ah. Sidaan ognahay, habeenada jiilaalka ayaa ka dheer xagaaga waxayna aad ugu nugul yahiin inay yeeshaan kuleyl hoose waqti dheer sababtoo ah la'aanta dhacdooyinka falaadhaha cadceedda. Heerkulkan hoose carrada ayaa ku qaboojisay xoog xoog leh.
Baraf aad u daatay ayaa ka tarjumaya qorraxda. Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in barafku awood u leeyahay inuu iftiimiyo iftiinka qoraxda, wuxuu ka celinayaa dhulka inuu si sahal ah u kululeeyo wuxuuna xoojiyaa waxtarka loo yaqaan saamaynta qaboojiyaha. Sababtaas awgeed, saameynta barafka ee duufaanta Filomena keentay waa la dareemi doonaa illaa ku dhowaad bartamaha ama dhammaadka Janaayo.
Sababaha duufaanta Filomena
Aan aragno waa maxay sababaha barafka waaweyn. Waa inaan ogaano in duufaantu aysan kaligeed mas'uul ka ahayn wax kasta oo dhacay, wixii aan ka ahayn gaar ahaan. Filomena waxay ahayd duufaan ku taal Gacanka Cádiz taasoo ku dhufatay hawad qoyan dhanka gacanka. Waxay ka horeysaa sida caadiga ah sababa noocyo kala duwan oo roobab tiro badan koonfurta iyo bariga. Kuwa ugu badan waxaa lagu arkay roobab mahiigaan ah oo ka da'aya Malaga halkaas oo wabiyada ay ku fataheen oo sababay khasaaro dhowr qof oo dad ah.
Waxa markan dhacay ayaa ah in Filomena uu soo jiiday qoyaan ka timid koonfurta oo ay weheliso dawada loo yaqaan 'anticyclone' oo ka timaada Atlantic ilaa Boqortooyada Ingiriiska oo hawada usii shubeysay wadankeena mudo todobaad ah. Marka cimilada qabow ay la kulanto carro heerkulkeedu hooseeyo oo ay ku socoto, waxay rogaal celisay roobabkii duufaanku la tageen baraf. Mid ka mid ah su’aalaha ay khubarada cimilada soo saarayaan ayaa ah in waxaas oo dhami ay la xiriiraan isbedelka cimilada. Dad badan ayaa isweydiinaya inay noqon karto qabowgan haddii meeraha ay kululaanayaan.
Waa inaad fahamtaa isbedelka cimilada inuu yahay mid aad u adag. In kasta oo isbeddelku yahay in la kordhiyo celceliska heerkulka adduunka, haddana cimilada kuma soo jawaabeyso qaab toosan. Taasi waa, isbeddelka muddada-dheer ee aagagga juqraafiyeed ee waaweyn marka heerkulku kaco. Waxaan ognahay in jawiga dhulku uu kululaanayo waana xaqiiqo cilmi ah oo la xaqiijiyey. Waxaas oo dhami waxay ku soo bandhigayaan tamar badan nidaam gebi ahaanba firfircoon oo tamartiisa dheeraadka ah ay sababtay xaalad aan la sii saadaalin karin waxayna leedahay awood badan oo aad u badan oo sababi karta saameyn maxalli ah oo aad u xoog badan.
Isla mar ahaantaana, iyada oo celceliska heerkulka adduunka uu kordhayo, diyaaradda loo yaqaan 'polar jet' waa la beddelay. Waa hawo socota oo ka dhacda stratosphere-ka taas oo ka caawisa kala soocidda gobollada cirifka iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xayiraadan ayaa isbedeleysa, waxaan arki doonaa xoogaa faragalin ah oo hawo badan oo arctic ah oo ku yaal aagga juqraafiyeed ee Jasiiradda Iberian.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto duufaanta Filomena iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Filomena iyo baraf ka dhacay Spain 2021